The MYAWADY Daily: January 2017
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောဒေသ၏ လက်ရှိတည်ငြိမ် အေးချမ်းနေမှု အခြေအနေများ ဆွေးနွေး
နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲအောင်
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Paw R.Seger အား လက်ခံတွေ့ဆုံစဉ်
နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲအောင် အား ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Paw R.Seger သည် ယမန်နေ့မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လာရောက် တွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံစဉ် ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောဒေသ၏ လက်ရှိတည်ငြိမ် အေးချမ်းနေမှု အခြေအနေ များနှင့် နှစ်ဖက် လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွင်း ရေရှည် သဟဇာတ ဖြစ်စွာ အတူလက်တွဲ နေထိုင်ရေးနှင့် လူသားချင်း စာနာ ထောက်ထားမှု အကူအညီများ ထောက်ပံ့ပေး နေမှု အခြေအနေများနှင့် လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်ပေး နေမှုများ၊ ကချင်ပြည်နယ် နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တို့ရှိ IDPs များနှင့် ပတ်သက်၍ လူသားချင်း စာနာထောက် ထားမှု အကူအညီပေးရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ နိုင်ငံတော် အစိုးရက လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများ ချုပ်ငြိမ်းစေရေး အတွက် အမျိုးသားပြန် လည်သင့် မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင် နိုင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် နေမှုများ၊ နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဆွစ်ဇာလန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနတို့၏ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးနှင့် လူသားချင်း စာနာမှု အကူအညီ ပေးရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည့် ဆွစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့ (SDC) တို့အကြား ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည့် ကရင်ပြည်နယ် နှင့် မွန်ပြည်နယ် တို့၌ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅ ဒသမ ၅ သန်းဖြင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံ လုပ်ငန်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ၏ အောင်မြင် ဖြစ်ထွန်းမှု များနှင့် ရှေ့ဆက်လက် ပိုမိုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး ဆိုင်ရာကိစ္စရပ် များအား ဆွေးနွေးခဲ့ ကြကြောင်း သိရှိရသည်။
တိုက်ပွဲရှောင်ဒုက္ခသည် များနှင့် ပတ်သက်သည့် လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှုအကူအညီ ပေးရေးဆွေးနွေး
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိန်ဝင်း
ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေ ညှိနှိုင်းရေးမှူး Ms. Renata Lok-Dessallien အား
ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိန်ဝင်း သည် ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေ ညှိနှိုင်းရေးမှူး Ms. Renata Lok-Dessallien ကို ယမန်နေ့နံနက် ၁ဝ နာရီတွင် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးရုံး ဧည့်ခန်းမ၌ တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
တွေ့ဆုံစဉ် ကချင်ပြည်နယ် နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) တို့တွင် လက်ရှိ ဖြစ်ပွားနေသည့် ပဋိပက္ခများ၊ တိုက်ပွဲရှောင် ဒုက္ခသည်များနှင့် ပတ်သက်သည့် လူသားချင်း စာနာ ထောက်ထားမှု အကူအညီ ပေးရေး ကိစ္စရပ်များ နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် တွင် ဖြစ်ပွားလျက် ရှိသော ပဋိပက္ခများနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ ကြသည်။
တွေ့ဆုံရာ၌ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မြင့်နွယ် နှင့်တာဝန်ရှိ သူများ တက်ရောက် ကြကြောင်း သိရှိရသည်။
မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ(၂၀) အမှတ်(၃၀)
AuroraJournal(20-30) by TheMyawadyDaily on Scribd
အလုပ်တစ်ခု ပြောဆိုလုပ်ကိုင် ရာတွင် အောင်မြင်ရာ အောင်မြင်ကြောင်း နည်းလမ်းကောင်း များစွာရှိသည်။ ထိုနည်းလမ်းကောင်း များကို ကောင်းစွာ အသုံးချ၍ မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာ အဖြာဖြာတို့သည် အောင်မြင် တိုးတက်မှုများ ရှိသကဲ့သို့ နည်းလမ်းကောင်း များနှင့် အကျိုးရှိစွာ အသုံးချနိုင်မှု အားနည်း၍ အခွင့်အလမ်းများနှင့် လွဲချော်မှုများလည်း ရှိတတ်သည်။
ထိုနည်းလမ်းကောင်း များစွာအနက် တစ်ခုသော နည်းလမ်းမှာ စကားပြောဆိုရာတွင် ချိုချိုသာသာ ပြောဆိုပြီး အလုပ်လုပ်ရာတွင် မှန်မှန်ကန်ကန် မြန်မြန်ဆန်ဆန် လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ မှန်မှန်ကန်ကန် မြန်မြန်ဆန်ဆန် လုပ်ဆိုသည်မှာ ရိုးရိုးသားသား ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လျင်လျင်မြန်မြန် လုပ်ဆောင်ခြင်း ကိုဆိုသည်။
မှန်ကန်၍ ချိုသာသော စကားကို လူတိုင်းနှစ်သက် ကြသည်။ နှုတ်ချိုလျှင် သျှိုတစ်ပါးပြီးသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ဘုရားရှင်ဟော တော်မူသော မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးတွင် သမ္မာဝါစာ ကောင်းမွန် မှန်ကန်သော စကားကို ဆိုခြင်းနှင့် သမ္မာကမ္မန္တော မှန်ကန်ရိုးသားစွာ လုပ်ကိုင်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ ချိုသာယဉ်ကျေးသော စကားကို လူတိုင်းနှစ်သက်၍ ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန် စေသည်။
သို့သော် မျက်နှာပေါ်တွင် ပြုံးပြီး နှလုံးသားတွင် အပြုံးမပါသော ဆက်ဆံရေးသည် ချိုသာယဉ် ကျေးမှုရှိသော်လည်း ခိုင်မာသော ဆက်ဆံရေး ဖြစ်လာမည် မဟုတ်ပေ။ အပြောကောင်း သလောက် အလုပ်မလုပ် နိုင်လျှင်လည်း အပြောနှင့် အလုပ်မညီ၍ လူအများ၏ ယုံကြည်မှု၊ လေးစားချစ်ခင်မှုကို ရရှိမည် မဟုတ်ပေ။
ဤတွင် အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် အပြော မကောင်းကြပါ။ အပြောအဆို မပြေပြစ်သော်လည်း အလုပ်လုပ်ရာတွင် စေတနာပါပါ လုပ်တတ်ကြ ပါသည်။ ထိုသူမျိုးသည် အပြောချို၍ အလုပ် မလုပ်သူထက် ဘဝအောင်မြင်မှု ရနိုင်သည်။ ထိုထက် အပြောလည်းကောင်း၊ အလုပ်လည်းကောင်း မည်ဆိုပါက အကောင်းဆုံး၊ အတော်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟု ဆိုရမည်သာ ဖြစ်သည်။
လူတိုင်းကြီးပွား ချမ်းသာလို ကြသည်။ အောင်မြင်ကျော်ကြား သူများ ဖြစ်လိုကြသည်။ အောင်မြင်စေသော နည်းလမ်းကောင်းများ လည်းရှိနေပါသည်။ ကောင်းစွာ အသုံးချနိုင်လျှင် တစ်ခုသော ဘဝ အဆင့်အတန်းသို့
တက်လှမ်းနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ အပြောကောင်း၊ အလုပ်ကောင်း ခြင်းသည် ဘဝ အောင်မြင်စေသော နည်းလမ်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် လူအများမှာ အပြောနှင့်အလုပ် ညီညွတ်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် အားထုတ်မှု နည်းပါးသည်ကို တွေ့ရသည်။ လူမှုဘ၀တွင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဆက်ဆံရေးသည် အရေးကြီးသည်။
ချိုသာယဉ်ကျေးစွာ ပြောဆိုခြင်းသည် ကောင်းမွန်သော ဆက်ဆံရေးကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ရိုးသား ပွင့်လင်းစွာ လျင်မြန်စွာ လုပ်ကိုင်ခြင်းသည် လူအများ၏ နှစ်သက်ယုံကြည်မှု၊ အားကိုးမှု တို့ကို တိုးပွားစေသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ပြောဆိုဆက်ဆံ ရာတွင် ချိုသာစွာ ပြောဆိုပြီး အလုပ်ကို ရိုးသားပွင့်လင်း လျင်မြန်စွာ လုပ်ကိုင်ကြမည် ဆိုလျှင် လူတိုင်းဘဝ၏ အောင်မြင်ကြီးပွား တိုးတက်စေမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ရေးသားတင်ပြ လိုက်ရပေသည်။
ပုဂံဒေသတွင် မီးပုံးပျံစီးလိုသည့် နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်နှင့် မီးပုံးပျံအလုံးရေ မျှတမှုမရှိသေး
ညောင်ဦး ၊ ၃၀-၁-၂၀၁၇
ပုဂံရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေ အတွင်း၌ လာရောက်ကြသည့် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များ အနေဖြင့် ပုဂံရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေ အတွင်း အထက်ဝေဟင် မှ မီးပုံးပျံစီး၍ ကြည့်ရှုလေ့လာ လိုသူများ များသော်လည်း လက်ရှိတွင် မီးပုံးပျံစီး လိုသည့် (Balloonist) နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်နှင့် ပုဂံဒေသအတွင်းရှိ မီးပုံးပျံအလုံးရေမှာ မျှတမှု မရှိသေးကြောင်း ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွား ညွှန်ကြားမှုဦးစီး ဌာန(ပုဂံရုံးခွဲ)မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောပြသည်။
၂ဝ၁၆ခုနှစ် အောက်တိုဘာ လမှ ဒီဇင်ဘာလထိ ပုဂံရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု နယ်မြေ အတွင်းသို့ အများဆုံး လာရောက်လည်ပတ် ကြသည့် အမေရိကန် ၊ ဗြိတိန်၊ဂျာမနီ၊ ထိုင်း၊ ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံသားများ အနေဖြင့် ပုဂံဒေသ၏ စေတီမြင်ကွင်း၊ ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်း ရှုခင်း၊ တုရင်တောင်၊ တန့်ကြည်တောင် ရှုခင်းအလှအပ များကို ကောင်းကင်ယံမှ ကြည့်ရှုလို ကြသော်လည်း လက်ရှိ ပုဂံဒေသ၌ ခရီးသွား ကုမ္ပဏီများက မီးပုံးပျံ အရေအတွက် နည်းပါးပြီး မီးပုံးပျံ စီးလိုသည့် နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်များပြား နေမှုကြောင့် နှစ်ရက်၊ သုံးရက် ကြိုတင်စာရင်းပေး ခြင်းများ ပြုလုပ်နေကြ ရသည်။
ပုဂံရှေးဟောင်း နယ်မြေအတွင်း၌ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်က နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည် ဝင်ရောက်မှု အရေအတွက်မှာ ဒီဇင်ဘာလထိ ၂၈၃၈၇၇ ဦး ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ယနေ့အချိန်ထိ ဧည့်သည် ဝင်ရောက်မှု များပြားနေဆဲ ဖြစ်သကဲ့သို့ ယခုအခါ မီးပုံးပျံစီးလိုသည့် နိုင်ငံခြားသား များမှာလည်း ပိုမိုများပြား နေဆဲဖြစ်သည်။
လက်ရှိ ပုဂံဒေသတွင် ခရီးသွား ကုမ္ပဏီ ၃ ခု ၊ မီးပုံးပျံ ၂၁ လုံးဖြင့်သာ ခရီးသွား ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင် သေးသဖြင့် မီးပုံးပျံစီးလိုသည့် နိုင်ငံခြားသား များအတွက် မီးပုံးပျံ အလုံးရေ ရာနှုန်းပြည့် မဖြည့်ဆည်းပေး နိုင်သေးကြောင်း သိရသည်။
ပုဂံဒေသတွင် ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ မှစ၍ ၂ဝ၁၇ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ထိ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီများက မီးပုံးပျံဖြင့် ခရီးသွား ဝန်ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်ပေး နေကြောင်း၊ ဇုန်အတွင်း မီးပုံးပျံဖြင့် ပျံသန်း လေ့လာမှုခွင့် ပြုချိန်မှာ တစ်နာရီ သတ်မှတ် ထားကြောင်း၊ မီးပုံးပျံစီးရာတွင် အရွယ်အစား အလိုက် ၈ ဦး၊ ၁၆ ဦး စီးနင်းနိုင်ကြောင်း၊ မီးပုံးပျံ တစ်လုံးလျှင် လိုက်ပါသည့် လူဦးရေအပေါ် မူတည်၍ အများဆုံး ဒေါ်လာ ၉၅ဝ ပေးရကြောင်း ၄င်းက ဆက်လက် ပြောပြကြောင်း သိရသည်။
Efforts should be made for success of Tatmadaw-owned agriculture and livestock breeding industries by accepting them as public welfare activities
Senior General Min Aung Hlaing inspects breeding of piglets.
The Tatmadaw-owned agriculture and livestock breeding industries are only for the welfare of Tatmadaw families but not for the prof its. So efforts should be made to ensure cheap prices and mass production, said Commander-in- Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing on his inspection tour of the model integrated farm of the Central Command yesterday morning.
The Senior General, accompanied by Commander-in-Chief (Navy) Admiral Tin Aung San, Commanderin- Chief (Air) General Khin Aung Myint, senior military officers from the Office of the Commander-in- Chief (Army) and the commander of Central Command, arrived at the model integrated farm this morning. At the briefing hall of the farm, officials reported to the Senior General and the party on breeding of Novogen Brown layers with the use of Evap Type cooling system, other layers, broilers, breeding and selling of DYL pigs, meat pigs and piglets, breeding of various kinds of fishes with threelayer system, breeding of dairy cows, milk production and selling and growing of Seintalone mango, tissue-cultured banana, Ngwehnin mushroom, star bean and vegetable plantations.
In response to the reports, the Senior General said three main duties of the Tatmadaw are: State defence, training and performing the public’s welfare. The Tatmadawowned agricultural and livestock breeding businesses would not only bring about the welfare of the families of the Tatmadaw but also help support the stability of commodity prices in the region thanks to the production of foodstuffs. If not, they would have to buy these foodstuffs in local markets. Asaresult, there would be high demand and prices, high. Efforts should be made for the success of it by accepting these works as the public welfare activities. It needs to manage extension of businesses depending on supply and demand of the market and increase of agriculture and livestock products. The Senior General noted that if one wants to develop any task, one must study about it.
Then, the Senior General said that quality strains and pedigree species, soil, water and techniques are of importance in agriculture and livestock breeding tasks. It is necessary to make choice of correct strains, systematic use of soil and water, and systematic carrying out of agriculture and livestock breeding. Seasonal crops and vegetables must be grown through greenhouse system as it isasuccessful technique. The Senior General spoke of the need to save the water for efficient use. They have to manage agriculture and livestock breeding tasks as samples. As some aqua feeds for Tilapia fish contain hormones which can develop the fish, they must try hard to produce aqua feeds themselves and give it to fish and extend successful agriculture and livestock farms in order to sell products inside and outside the command headquarters at fair prices.
Then, the Senior General and party inspected Ngwehnin mushroom, star bean and crops produced from the model integrated farm of the command headquarters.
Next, the Senior General viewed around cultivation of star bean plantations, operating of fish farms, breeding of dairy cows, breeding of DYL pigs at battery cases, separate keeping of female pedigree DYL pigs, breeding of piglets and adult pigs.
Vegetables, meat, fish and eggs produced from the integrated farm were sold to families of Tatmadawmen. From 1 September 2016 to 28 January 2017,atotal of 824,501 eggs, 479 viss of pork, 93 piglets, 8,733 viss of fish, 29,008 viss of milk, 218 viss of Ngwehninmushroom and 6,299 viss of chicken were sold to officers, other ranks and families of the military command and teachers at fair prices, fetching more than Ks-30 million for welfare tasks during the five-month period.
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ရတနာပုံသတင်းစာတိုက် အား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ရတနာပုံသတင်းစာတိုက် အတွင်း
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးစဉ်
နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာ ၏ သဘော သဘာဝမှာ မှန်ရန်နှင့် မြန်ရန်လိုကြောင်း၊ မိမိသတင်းစာ၏ သတင်းများသည် မှန်ကန်မှုရှိပြီး ပြည်သူလူထု စိတ်ဝင်စားသည့် သတင်းများ၊ စာဖတ်သူအား အကျိုးရှိစေသည့် သတင်းများ၊ သတင်းဦး သတင်းထူးများ ဖြစ်ရန်လိုကြောင်း၊ သတင်းစာ၏ သတင်း အရည်အသွေးနှင့် ပုံနှိပ်အရည် အသွေးများလည်း ကောင်းမွန်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ နံနက်မိုးလင်း သည်နှင့် သတင်းစာအား စာဖတ်သူလက်ထဲ ရောက်အောင် မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဖြန့်ချိပေးနိုင် ရမည် ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် က ယမန်နေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် ရတနာပုံ သတင်းစာတိုက် အား သွားရောက် ကြည့်ရှု စစ်ဆေးစဉ် ထည့်သွင်း ပြောကြားသည်။
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် သည် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ရေ ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်စန်း၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်အောင်မြင့်၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး
(ကြည်း)မှ တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ နှင့် အလယ်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးတို့ လိုက်ပါ၍ ယမန်နေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် ရတနာပုံ သတင်းစာတိုက် အား သွားရောက် ကြည့်ရှု စစ်ဆေးသည်။
ဦးစွာ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား အစည်းအဝေး ခန်း၌ စာတည်းမှူးချုပ်က ရတနာပုံသတင်းစာ ပုံနှိပ်ဖြန့်ချိမှု အခြေအနေ များအား ရှင်းလင်းတင်ပြရာ ရှင်းလင်း တင်ပြမှုများ အပေါ် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က တိုက်ပိုင် သတင်းထောက်များ အနေဖြင့် နယ်ပယ်စုံမှ ဒေသသတင်းများကို ယခုထက်ပိုမို ၍ ရယူရေးသား နိုင်ရေး၊ မိမိ၏ သတင်းကို ခိုင်ခိုင်မာမာ တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံ၍ ရေးသား ဖော်ပြရေး၊ သတင်းစာ မှတစ်ဆင့် ပြည်သူလူထု စိတ်ဝင်စားမည့် အကြောင်းအရာ များကို ကဏ္ဍစုံလင်စွာ ထည့်သွင်း အသိပေးဖော် ပြနိုင်ရေးတို့အား ကြိုးစား လုပ်ဆောင်ရန် မှာကြား၍ လိုအပ်သည်များ ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက် ပေးသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ရတနာပုံ သတင်းစာတိုက် အတွင်း လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ များကို လိုက်လံကြည့်ရှု စစ်ဆေးရာ တာဝန်ရှိသူ များက ရှင်းလင်း တင်ပြကြပြီး တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က သတင်းစာတိုက် ဝန်ထမ်းများ အတွက် ဂုဏ်ပြုဆုငွေများ ချီးမြှင့် ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
Senior General Min Aung Hlaing inspects Yadanarbon Daily
Senior General Min Aung Hlaing hears reports on working processes of Yadanarbon Daily presented by an off icial.
Correctness and swiftness is the value of news. The daily must carry news that is accurate, public interesting and beneficial and the scoop. News and printing quality must be good. The newspaper must reach every reader every morning, said Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing during his inspection of Yadanarbon Daily yesterday afternoon.
The Senior General accompanied by Commander-in- Chief (Navy) Admiral Tin Aung San, Commander-in- Chief (Air) General Khin Aung Myint, senior military officers of the Office of the Commander-in-Chief (Army) and the commander of Central Command inspected the daily yesterday afternoon.
At the meeting hall, the Senior General and party heardareport on the daily’s publication presented by the chief editor. The Senior General said reporters of the daily should strive to gather and report news from more regions, take the responsibility and accountability of their news reports, and featureawider variety of public interesting sectors. He looked into the requirements.
Officials then conducted the Senior General and party round the daily. The Senior General presented cash awards for the staff of the daily.
30 1 2017 MyawadyDaily by TheMyawadyDaily on Scribd
မြ၀တီရသစုံမဂ္ဂဇင်း အတွဲ(၆၅) အမှတ်(၄)
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ
MyawadyMagazine(Feb 2017) by TheMyawadyDaily on Scribd
NgweTharYe(Feb 2017) by TheMyawadyDaily on Scribd
ပလိပ်-ဘဲလင်း-စဉ့်ကိုင် ရထားလမ်းပိုင်း ALLTM စက်ကြီးဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်နေမှုကို ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း အပြီး လုပ်ဆောင်မည်
မန္တလေး ၊ ၂၇-၁-၂၀၁၇
ရန်ကုန်-မန္တလေး အစုန် ၊ အဆန်လမ်းပိုင်းရှိ ပလိပ်-ဘဲလင်း- စဉ့်ကိုင် ရထားလမ်းပိုင်း ALLTM စက်ကြီးဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင် မှုကို ယမန်နေ့မှစ၍ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိရာ ဖေဖော်ဝါရီလ အတွင်း အပြီးလုပ်ဆောင် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ မီးရထားမြို့ပြ နှင့် အင်ဂျင်နီယာ ဌာန (မန္တလေး)မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောပြသည်။
အဆိုပါ ရန်ကုန်-မန္တလေး အစုန်၊ အဆန် လမ်းပိုင်းကို ALLTM စက်များဖြင့် ရထားလမ်းပိုင်း အရည်အသွေး မြှင့်တင်နိုင်ရန် အတွက် ယခင်ဘဏ္ဍာနှစ် အတွင်း က မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း ၌ ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုများ အနေဖြင့် ဇလီဖားတုံး အကွာအဝေး မှန်ကန်စေရန်၊ သံလမ်းအဆက် Joint Square ဖြစ်စေရန်၊ သံလမ်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပြည့်စုံရန်၊ Rail-Gap အဆက် မှန်ကန်ရန်၊ ရထားသံလမ်း များတွင် ထည့်သွင်း ထားသည့် ကွန်ကရစ် ဇလီဖားတုံး နှင့် သစ်သား ဇလီဖားတုံး မှန်ကန်စေရန် စသည့်အချက် များကို ကြိုတင်ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက် ထားခဲ့ရာ ယနေ့မှစ၍ ပလိပ် - ဘဲလင်း- စဉ့်ကိုင်လမ်းပိုင်း ၁ဝမိုင်ကို ALLTM စက်ဖြင့် အကြီးစား အဆင့်မြှင့်တင် မှုကို ဖေဖော်ဝါရီလ အတွင်း အပြီးလုပ်ဆောင် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
''အခု အဆင့်မြှင့်တင် နေတဲ့စက်တွေက ကွန်ပျူတာ စနစ်နဲ့ အော်တိုလုပ်ဆောင် ပေးတဲ့စက်ပါ။ စက်ရဲ့ အသုံးဝင်ပုံ ကတော့ လမ်းကို အဖြောင့်ဆွဲတဲ့ နေရာရယ်၊ ရေချိန် မှန်အောင်နဲ့ ဇလီဖားတုံးကို ပတ်ကင်ရိုက်တဲ့ နေရာတွေမှာ အလွန် ကောင်းတယ်။ ပြီးတော့ ရထားလမ်းပိုင်း တွေမှာ အနိမ့်အမြင့် မညီလို့ ခုန်နေတာတွေ ကိုလဲ တစ်ပြေးညီတည်း ဖြစ်အောင် ချိန်ပေးနိုင်တဲ့ စက်ပါ''ဟု ၄င်းက ပြောပြသည်။
၂ဝ၁၆ခုနှစ် ဇူလိုင်လ အတွင်းမှစ၍ တိုင်း-၅ ဧရိယာဖြစ်သည့် နေပြည်တော် ပျဉ်းမနား၊ တပ်ကုန်း၊ ရမည်းသင်း နှင့် သာစည်လမ်းပိုင်း တို့ရှိ လမ်းများကို ၄င်းစက်များဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့ ရာမှ မန္တလေးလမ်းပိုင်း ဖြစ်သည့် ရွာပုလဲဘူတာမှ ကျောက်ဆည် ဘူတာထိကို ဒီဇင်ဘာလ ပထမပတ်က စတင်လုပ်ဆောင် ခဲ့ပြီး ယခုလက်ရှိ ပလိပ်-ဘဲလင်း- စဉ့်ကိုင် လမ်းပိုင်းကို ယနေ့မှစ၍ အကြီးစား အဆင့်မြှင့်တင် မှုများ လုပ်ဆောင်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
''အခု အဆင့်မြှင့်တင် မှုတွေ ဆောင်ရွက်ပြီး သွားရင် ရန်ကုန်- မန္တလေး အစုန်၊ အဆန် လမ်းပိုင်းကို အရင်က နှစ်နာရီ လောက်ကြာတယ် ဆိုရင် တစ်နာရီ လောက်နဲ့ အရောက်ပို့ဆောင် ပေးနိုင်တော့ မှာပါ။ မြို့တွင်းလမ်းပိုင်း တွေကိုလဲ အဆင့်မြှင့်တင် မှုတွေ လုပ်ဆောင် နေပါတယ်'' ဟု ၄င်းက ဆက်လက် ပြောပြ၍ သိရသည်။
ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း ကိုကိုးကျွန်းမြို့ရှိ အရာရှိ ၊ စစ်သည် ၊ မိသားစုများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ ၀န်ထမ်းများ ၊ ရပ်မိရပ်ဖများနှင့် ဒေသခံပြည်သူများအား သွားရောက်တွေ့ဆုံ
ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း
ကိုကိုးကျွန်းမြို့ရှိ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ ရပ်မိရပ်ဖများနှင့် ဒေသခံပြည်သူများအား တွေ့ဆုံစဉ်
ကိုကိုးကျွန်းမြို့ရှိ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ ရပ်မိရပ်ဖများနှင့် ဒေသခံပြည်သူများအား
နေပြည်တော် ၊ ၂၇-၁-၂၀၁၇
ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း သည် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော် အရာရှိကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါ၍ ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ကိုကိုးကျွန်းမြို့သို့ ရောက်ရှိရာ လေဆိပ်၌ တပ်မတော်(ရေ) မှအရာရှိကြီးများ၊ မြို့နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နှင့် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူ များက ကြိုဆိုနှုတ်ဆက် ကြသည်။
ယင်းနောက် ကိုကိုးကျွန်းရေတပ် အခြေစိုက်စခန်း ရှင်းလင်းဆောင် ၌ ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ကြည်း) အား ရေတပ်စခန်းမှူး က ရည်မှန်းချက် တာဝန်အပေါ် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများ၊ ဥစားကြက်၊ DYL ဝက်အပါအဝင် မွေးမြူရေး ဆောင်ရွက် ထားရှိမှု၊ မျိုးကောင်းအုန်းပင် များစိုက်ပျိုးမှုနှင့် မိုးရာသီကာလ အုန်းပင် တစ်အုပ်တစ်မ စိုက်ပျိုးနိုင်မှု အခြေအနေများ၊ အုန်းစိုက်ပျိုးရေး နှင့် အုန်းထွက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရေး အတွက် ဒေသခံများ နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများ၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် စိုက်ပျိုးရေ နှင့် သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ ရရှိရေး၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေ တို့အား ရှင်းလင်း တင်ပြသည်။
ရှင်းလင်းတင်ပြမှု အပေါ် ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (ကြည်း)က လိုအပ်သည်များ မှာကြားဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
ထို့နောက် ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ကြည်း) နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ကိုကိုးကျွန်း ဆိပ်ခံတံတား တည်ဆောက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေများအား သွားရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးရာ တာဝန်ရှိသူများက လိုက်လံရှင်းလင်း ပြသကြသည်။ ယင်းနောက် ကျွန်းပတ်လမ်း အတိုင်း မော်တော်ယာဉ် များဖြင့် လှည့်လည်ကြည့်ရှု ကြပြီး ကိုကိုးကျွန်း ပတ်လမ်းမှ ကြွက်ကျွန်းသို့ သွားသည့် မြေသားလမ်း ဖောက်လုပ်ရန် လျာထားမှု အခြေအနေ များအား ကြည့်ရှု စစ်ဆေးသည်။
ဆက်လက်ပြီး မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ကြည်း) သည် ကိုကိုးကျွန်းမြို့နယ် ခန်းမ၌ ကိုကိုးကျွန်းမြို့ရှိ ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများ၊ ရပ်မိရပ်ဖများနှင့် ဒေသခံ ပြည်သူများအား တွေ့ဆုံ၍ ကိုကိုးကျွန်းဒေသ သည် နိုင်ငံတော်အတွက် ရေကြောင်း စိုးမိုးမှု မဟာဗျူဟာကျသော နေရာဖြစ်သဖြင့် နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး အတွက် အရေးကြီးသည့် အခြေအနေများ၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရ နှင့် တပ်မတော်မှ ကိုကိုးကျွန်းမြို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် လိုအပ်သည် များအား ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေး နေမှုများနှင့် ကိုကိုးကျွန်းမြို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာမှု အခြေအနေများ၊ ကိုကိုးကျွန်းမြို့ တွင် တာဝန်ထမ်း ဆောင်လျက် ရှိသည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း များနှင့် ဒေသခံပြည်သူများ သွားလာရေး အဆင်ပြေ စေရန်အတွက် တပ်မတော်မှ လေယာဉ်၊ ရေယာဉ်များဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးနေမှု အခြေအနေများ၊ နယ်မြေခံ ရေတပ်စခန်း ဌာနချုပ်မှ ဥစား ကြက်များ မွေးမြူပြီး ဒေသခံပြည်သူ များသက်သာ ချောင်ချိရေးအတွက် သက်သာသော ဈေးနှုန်းဖြင့် ရောင်းချပေးနေမှု အခြေအနေများနှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန်အတွက် တပ်မတော် မှ နိုင်ငံတော်အစိုးရ နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများအား ရှင်းလင်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက နယ်မြေဒေသ အခြေအနေများအား ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၏ တင်ပြချက်များအပေါ် ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (ကြည်း) က လိုအပ်သည်များ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
ယင်းနောက် ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ကြည်း) က ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများအတွက် စားသောက်ဖွယ်ရာများ ပေးအပ်ရာ မြို့နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက လက်ခံရယူသည်။
ယင်းနောက် ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများ၊ ရပ်မိရပ်ဖများနှင့် ဒေသခံပြည်သူများ အတွက် တပ်မတော်အရာရှိ ကြီးများက စားသောက်ဖွယ်ရာများ ပေးအပ်ကြရာ တာဝန်ရှိသူများက လက်ခံရယူ ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ကြည်း)က တွေ့ဆုံပွဲသို့ တက်ရောက် လာကြသည့် ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများ၊ ရပ်မိရပ်ဖများနှင့် ဒေသခံပြည်သူ များအား ရင်းရင်းနှီးနှီး လိုက်လံ နှုတ်ဆက်သည်။
ကိုကိုးကျွန်းမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံအတွင်း လှည့်လည် ကြည့်ရှုစဉ်
အုန်းထွက်ပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်သည့် အိမ်အလှဆင်ပစ္စည်းများနှင့် အိမ်သုံးပစ္စည်းများ
အုန်းဆီသန့်စက်ရုံအတွင်း အုန်းဆီသန့်ထုတ်လုပ် နေမှုတို့ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးစဉ်
၄င်းနောက် ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ကြည်း)နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ကိုကိုးကျွန်းမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ ရောက်ရှိကြပြီး ဆေးရုံအတွင်း လှည့်လည် ကြည့်ရှုကာ လိုအပ်သည်များ ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ပေးပြီး ဆေးရုံတက်ရောက် ကုသလျက်ရှိသော လူနာများအား ရင်းရင်းနှီးနှီး လိုက်လံနှုတ်ဆက် အားပေးစကား ပြောကြား၍ လက်ဆောင် ပစ္စည်းများ ပေးအပ်သည်။
ယင်းနောက် ညနေပိုင်းတွင် ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ကြည်း) သည် ကိုကိုးကျွန်း တပ်နယ်ခန်းမ၌ တပ်နယ်မှ အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအား တွေ့ဆုံအမှာစကား ပြောကြားသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ကြည်း) က ကိုကိုးကျွန်းမြို့သည် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ အနောက်တောင်ဘက် အစွန်ဆုံးတံခါးဝ ဖြစ်ပြီး ရေကြောင်းစိုးမိုးမှု မဟာဗျူဟာ ကျသည့် နေရာဒေသတစ်ခု ဖြစ်သောကြောင့် အရေးကြီးသော တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်နေရမှုကို ဂုဏ်ယူနေကြရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ယနေ့ခေတ်တွင် ကျွန်းများ၏ အရေးပါမှုသည် ပိုမို၍သိသာ ထင်ရှားပြီး အရေးပါ လာကြောင်း၊ ကျွန်းများ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အတူ ရေသယံဇာတ များနှင့် ရေကြောင်းစွမ်းအား များသည် နိုင်ငံတော်အတွက် အထောက်အကူ များစွာရရှိကြောင်း၊ မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်ပြီးသားနေရာများနှင့် ရေသယံဇာတများ မဆုံးရှုံးစေရန် ကာကွယ်သွားရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့ကျင့်နေရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ၄င်းအပြင် နိုင်ငံတော်၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် တပ်မတော်မှ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဖြင့် ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေနှင့် ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန် အတွက် တပ်မတော်မှ နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် နေမှု အခြေအနေ များအား ဦးစွာရှင်းလင်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများ စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေ စေရန်နှင့် သက်သာ ချောင်ချိမှု ရရှိစေရန်အတွက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို မူဝါဒများချမှတ် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိမှု အခြေအနေ၊ ၀တ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာ တပ်မတော်များ နည်းတူ ခေတ်ကာလ နှင့် ကိုက်ညီအောင် ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိမှု အခြေအနေ၊ နေရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး တပ်တွင်း လူနေနှင့် အုပ်ချုပ်မှု အဆောက်အဦ များအား မူဝါဒနှင့်အညီ လုံလောက်စွာ ဆောက်လုပ်ထား ရှိပေးထားမှု အခြေအနေ၊ စစ်မှု ထမ်းဆောင်ပြီး အငြိမ်းစား တပ်မတော်သားများ ဘဝဖြင့် နေထိုင်မှု အဆင်ပြေစေရန် အတွက်လည်း ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက် စစ်မှုထမ်းဟောင်း အိမ်ရာ များအား တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် များအလိုက် တည်ဆောက် နေရာချထား ပေးလျက်ရှိမှု အခြေအနေနှင့် တပ်မတော်သား မိသားစုဝင်များ၏ ပညာရည်မြှင့်တင်ရေး နှင့် ပတ်သက်၍ တပ်မတော်မှ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိပြီး တပ်မတော်သား မိသားစုဝင် ထူးချွန် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား အားပေး ချီးမြှောက်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်မှု အပြင် ခေတ်မီတပ်မတော် တည်ဆောက်ရာ တွင် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည့် တပ်မတော်သားများ ပညာရည် မြှင့်တင်ပေးနေမှု အခြေအနေ များအား အသေးစိတ် ရှင်းလင်း မှာကြားသည်။
ဆက်လက်ပြီး မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ကို သိရှိပြီး အောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်ရေး၊ ပြည်သူပါမှ စစ်နိုင်မည်ဆိုသည့် အတိုင်း တပ်နှင့်ပြည်သူ တစ်ဆက်တည်း တစ်သားတည်း ဖြစ်စေရေးအတွက် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်အောင် အလေးထား ဆောင်ရွက်ရေး၊ ဒေသခံ ပြည်သူများအား လိုအပ်သည့် အကူအညီများ ပေးရေးတို့အား တိုက်တွန်း ပြောကြားသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်နယ်မှ အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများ အတွက် ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ကြည်း) က စားသောက်ဖွယ်ရာများ ကိုလည်းကောင်း၊ တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ က စားသောက်ဖွယ်ရာ များနှင့် လက်ဆောင် များကို လည်းကောင်း အသီးသီး ပေးအပ်ပြီး တက်ရောက် လာကြသည့် အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအား ရင်းရင်းနှီးနှီး လိုက်လံ နှုတ်ဆက်သည်။
ယင်းနောက် ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ကြည်း) နှင့်အဖွဲ့ဝင် များသည် ရေတပ်စခန်း ဌာနချုပ်ရှိ တပ်မိသားစုဝင် များနှင့် ဒေသခံပြည်သူ များက အုန်းထွက်ပစ္စည်း များဖြင့် ပြုလုပ်သည့် အိမ်အလှဆင် ပစ္စည်းများနှင့် အိမ်သုံးပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်နေမှု၊ အုန်းဆီသန့် စက်ရုံအတွင်း အုန်းဆီသန့် ထုတ်လုပ်နေမှု တို့အား ကြည့်ရှု စစ်ဆေးရာ တာဝန်ရှိသူ များက လိုက်လံရှင်းလင်း ပြသကြသည်။
ထို့နောက် ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ကြည်း)နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ရေတပ်စခန်း ဌာနချုပ်ရှိ စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေး ခြံအတွင်း ဥစားကြက်၊ DYL ဝက်နှင့် နို့စားနွားများ မွေးမြူထားရှိမှု၊
Green House ဖြင့် သီးနှံပင်များ စိုက်ပျိုးထားရှိမှု တို့ကို ကြည့်ရှု စစ်ဆေးရာ တာဝန်ရှိသူများ က လိုက်လံရှင်းလင်း တင်ပြကြပြီး တင်ပြချက် များအပေါ် ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ကြည်း) က လိုအပ်သည်များ ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေး ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
Labels: တပ်မတော်ရေးရာ, နယ်သတင်း
Vice-Senior General Soe Win meets officers, other ranks, families, departmental personnel, townselders and local residents in Coco Island Town
Vice-Senior General Soe Win meets officers, other ranks and families in Coco Island Station.
Deputy Commander-in-Chief of Defence Services Commander-in- Chief (Army) Vice-Senior General Soe Win, accompanied by senior military officers from the Office of the Commander-in-Chief and officials, arrived in Coco Island Town on 25 January morning. They were welcomed at the airport by senior military officers from Tatmadaw (Navy), the township administrator and departmental officials.
At the briefing hall of the Coco Island Naval Base, the Vice-Senior General heard reports presented by the base commander on implementation of the missions, carrying out of breeding tasks including layers and DYL pigs, growing of quality strains of coconut plants, cultivation of coconut plants in monsoon onamanageable scale, cooperation with residents to cultivate coconut plants and produce coconut products, and cooperation with the township administrative body for cultivation and sufficient supply of water for regional development.
After hearing the reports, the Vice-Senior General gave necessary instructions.
Then, the Vice-Senior General and party inspected progress in construction of the Coco Island jetty where officials conducted them around the jetty. Next, the Vice-Senior General inspected the site earmarked for construction of the earthen road from Coco Island circular road to the Kywet Island after viewing round the island circular road by car.
In the afternoon, the Vice-Senior General met with departmental personnel, townselders and residents at the township hall. He explained the importance of Coco Island region for the security of the State as it is located on the strategic area for maritime infl uence, fulfillments of the government and the Tatmadaw for development of Coco Island Town, progress of Coco Island Town, smooth transport for government service personnel who are discharging duty on the island and local residents by airplane and vessel from the Tatmadaw, breeding of layers by local naval region command headquarters and sale of eggs at fair prices for welfare of local people, and cooperation of the Tatmadaw with the government for ensuring eternal peace.
Then, the township administrator reported on situations of the region. After hearing the reports by departmental officials, the Vice-Senior General coordinated necessary matters.
Next, the Vice-Senior General presented foodstuffs for departmental personnel to the township administrator while senior military officers gave foodstuffs for departmental staff, townselders and local residents to officials.
Vice-Senior General Soe Win inspects progress of jetty in Coco Island Town.
Vice-Senior General Soe Win gives gift to patient at Coco Island Township People’s Hospital.
After the meeting, the Vice- Senior General cordially greeted departmental personnel, townselders and local residents who attended the ceremony.
Afterwards, the Vice-Senior General and party proceeded to the Coco Island Township People’s Hospital and visited there. After coordinating the necessary matters, the Vice-Senior General cordially comforted the patients and presented gifts to them.
The Vice-Senior General met with officers, other ranks and families of Coco Island Station at the station hall.
In his address, he said Coco Island is the southernmost door of the country which isastrategic place for naval advantage. So service members discharging duties at the island should take pride of themselves. The vitality of islands has become more and more significant nowadays. Possession of islands, marine resources and naval power is much beneficial to the country. All must protect the territorial waters and marine resources. Hence, constant training is required. He then explained the Tatmadaw’s national political role in the interest of the country and its cooperation with the government for achieving eternal peace.
He also explained adoption and implementation of farming policies for easing food, clothing and shelter needs of officers, other ranks and families, efforts being made for providing modern-age uniforms and dresses of international level in connection with clothing needs, building of adequate number of quarters and administrative buildings in accord with the policies in connection with accommodation needs, military-command-wise provision of housing estates for war veterans under priority based for easing accommodation needs of retired service men and women, constant fulfillment for the education promotion of families, support for outstanding children of the families, education promotion of Tatmadaw members which is essential for Tatmadaw modernization.
Next, the Vice-Senior General urged them to know and perform their duties and focus on having good dealings with the publicand render necessary assistance to the local people in order that the Tatmadaw and the people are in oneness as the motto says war can be won only through public participation.
After the meeting, the Vice-Senior General presented foodstuffs to the officers, other ranks and their families of the station and seniormilitary officers, foodstuffs and gifts. Next, the Vice-Senior General cordially greeted those present.
The Vice-Senior General and party then viewed production processes of home decoration materials and household goods made from coconut products by the Tatmadaw families and pure coconut oil at the coconut oil factory. They were conducted round there by officials.
At the farm of the naval base, the Vice-Senior General and party inspected the breeding of layers, DYL pigs and dairy cows and the cultivation of vegetables in greenhouses. Officials conducted them round the farm. Later, the Vice-Senior General fulfilled the needs.